हिमपातले ढोरपाटन उपत्यकामा आलु रोप्न एक महिना ढिलाई : अहिले स्थानीयलाई भ्याईनभ्याई ! – ebaglung.com
हिमपातले ढोरपाटन उपत्यकामा आलु रोप्न एक महिना ढिलाई : अहिले स्थानीयलाई भ्याईनभ्याई !
२०७५ चैत्र १२, मंगलवार १७:२८	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
छविलाल पाण्डे, ढोरपाटन बागलुङ २०७५ चैत १२ । ढोरपाटन क्षेत्रमा कृषकहरुले यस बर्ष करिब एक महिना पछि आलु रोप्न सुरु गरेका छन् । माघ र फागुन महिनाको अन्तिम सातासम्म परेको हिँउ नपग्लिएका हुनाले स्थानीयहरुले चैत दोश्रो सातादेखि आलु रोप्न सुरु गरेका हुन् ।
ढोरपाटनबाट सहकर्मी दिलमायाँ अदैले यतिखेर सबैलाई आलुको बीउ रोप्न भ्याईनभ्याई छ, घरपरिवार थोरै हुनेले ज्यालामा मानिस खोजेर आलु लगाई रहेका छन् । अबको तीन चार दिनमा भ्याईन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । हिउँ नै नपग्लिएपछी आलुको बीउ रोप्न ढीला भएकोले अहिले चटारो परेको पनि उनले बताईन् ।
कृषकहरुले ढोरपाटन नगरपालिकाको नौथर, पाखाथर, नवी, काँग, मस, बिजा, छ्यान्तुङ, निसीखोला गाउँपालिकाको निेललढोर लगाएतका क्षेत्रमा कृषहरुलाई आलु रोप्ने चटारो छ । चिसो छल्न पशु चौपाया सहित गाउँ झरेका स्थानिय बासिन्दा गर्मी बढेपछी पशुचौपाँया लिएर ढोरपाटन पुगेर आलु रोप्न व्यस्त रहेको स्थानीयले बताए ।
ढोरपाटनको आलु देशका मुख्य शहरहरुमा गाउँबाटै पुग्ने गरेपछि स्थानिय कृषहरुको राम्रो आम्दानीको श्रोत बन्दै गएको छ । ढोरपाटन उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा मात्रै करिब २५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती लगाउने गरिएको र ढोरपाटन, निसेल ढोर लगाएतका सबै क्षेत्रमा गरी करिब ९० हजार केजी आलुको विउ लगाउने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना व्दारा सञ्चालित ढोरपाटन आलु पकेट क्षेत्र कार्यक्रमका सचिब होमलाल भुसालले बताए ।
ढोरपाटनमा रैथाने जातको आलु सँगै खुमल रातो, कार्डिनल, खुमल सेतो, निलो जातका आलु उत्पादन गर्ने गरिन्छ । यतिबेला मौसमले साथ दिएका कारण अधिकाँश कृषहरुले आलु लगाउन सुरु गरीसकेको र चैत १५ सम्म विउ लगाइसक्ने भुसालको भनाइ छ ।
तस्वीर- धीरज बिक्रम खड्का ।
बरेङ गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मासंग ईबागलुङको कुराकानी ! बिषयगत बिज्ञहरुको सुझाबमा गुरुयोजना बनाएर गाउपालिकाको विकासमा अगाडी बढेका छौं : अध्यक्ष शर्मा
जैमिनी- ५ विनामारेमा चट्याङ परेर रू ५ लाख भन्दा वढिको क्षती !